2014: Sannadka Khibradda Macaamiisha | Martech Zone
Waxaan jeclaan lahaa in sanad walba uu yahay sanadkii waayo aragnimada macmiil ee shirkaddeena midwalba, miyaanay ahayn? Waan ogahay in taasi aysan cinwaanku ka baxsanayn. Waagii hore waxaan idhi adeegga macaamiisha hadda waa udub dhexaad istaraatijiyad bulsho oo shirkad kasta leh. Sababtoo ah dabeecadda dabiiciga ah ee macaamiisha si ay ula wadaagaan oo ay u baaraan macluumaadka khadka tooska ah ee ku saabsan alaabada ay isticmaalaan, shirkadaha ay la shaqeeyaan iyo astaamaha ay jecel yihiin ama ay ku jahwareersan yihiin, istiraatiijiyad kasta oo warbaahinta bulshada ku saabsan waxaa si xun u dhaawici kara ama u horumarin kara dhawaaqyada macaamiisha. guud ahaan internetka.
Maaddaama baraha bulshada ay korayaan oo ay sii ballaaranayaan 2014, ayaa sidoo kale tirada macaamiisha ay ku dhahayaan iyo ku wadaagayaan baraha bulshada. Sanadka 2014 lama inkiri karo sanadka waaya aragnimada macaamiisha tanina dhamaan waxaa kabiyey baraha bulshada. Infografkan waxaan ka wada hadli doonnaa sababta hadda loo joogo waqtigii looga faa'iideysan lahaa sirdoonka bulshada si loo dhammaystiro khibradda macaamiisha iyo sida aad tallaabo u qaadi karto.
Beddelaaddu waxay si toos ah ugu xidhan yihiin dareenka shucuurta ah ee macaamilku ama ganacsigu sameeyo markay aaminaan inay samaynayaan go'aan wax iibsi oo wanaagsan. Maaddaama adeegga macaamilku yahay qodobka 1aad ee kalsoonida, waa wax aan caqli-gal ahayn oo ay tahay inaad leedahay waayo-aragnimo weyn oo macaamiil ah si aad ula xiriirto, u hesho una soo jiidato macaamiisha khadka tooska ah.
Tags: hawlgelinta macaamiishakhibrada macmiilkaujeedka macaamiishadaacadnimada macaamiishaAdeegga macaamiishaujeeddocusubbrandanalyticshawlgelinta khadka tooska ahdib u eegista internetkadareenka internetkakalsooni